साग खेल्न आएका खेलाडी पोखरा देखेर दंग ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Sport/साग खेल्न आएका खेलाडी पोखरा देखेर दंग !
कास्की– यतिबेला पोखरा सागमय बनेको छ । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) अन्तर्गत पोखरामा आठ खेल भइरहेका छन् । साग खेलका लागि ८४० खेलाडी र अफिसियल यतिबेला पोखरामा छन् ।
पोखराको सुन्दरतासँग रमाइरहेका खेलाडीबाट नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार हुने विश्वास गण्डकी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले लिए । सागले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालले भने, “यतिबेला नेपालबाहेक छ देशका खेलाडीको जमघट छ । उनीहरु पोखरामा खेलमात्र खेलिरहेका छैनन् । यहाँको सौन्दर्यमा पनि रमाइरहेका छन् ।”
“साहसिक खेलको शहर पोखराका धेरै कुराले पनि सागमा सहभागी खेलाडीबाट प्रचारप्रसार हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ”, उनले भने, “नेचर, कल्चर र एडभेन्चरलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बिकाउन खोजिरहेका छौँ, यस खेलबाट पक्कै पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेछ ।” संस्कृतिको खानी पोखराको आसापास स्थानको अवलोकन गराउन सके अझ प्रचारप्रसार हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले होटल व्यवसायीलगायत सम्पूर्णले राम्रो आतिथ्यतामा जोड दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायीहरुमा पनि साग खेलले बेग्लै उत्साह थपेको साग खेल आवास तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं पर्यटन व्यवसायी सूर्य भुजेलले बताए ।
“आ–आफ्नो देशका ट्र्याकसुटमा बिहान–बेलुका खेलाडीको टिमको लर्कोले लेकसाइडमा रौनक थपेको छ । यो हाम्रा लागि निकै ठूलो अवसर हो । हामी पैसाले गर्न नसक्ने विज्ञापन खेलाडीबाट भइरहेको छ”, उनले भने । पोखरामा रहेका खेलाडीले काठमाडौँका खेलाडी साथीलाई पोखराका बारेमा बताइरहेको र खेल सकिएका खेलाडी काठमाडौँबाट पोखरा घुम्न आउने तयारीसमेत गरेको भुजेलले जानकारी दिए।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले साग खेल पोखरामा हुनुलाई सुनौलो अवसरका रूपमा लिएको बताए । उनले भने, “पोखराको सदाबहार अनुकूल हावापानी, सौन्दर्यसँगसँगै हामीले प्रदान गरेको आतिथ्यताले पनि विदेशी खेलाडी खुशी हुनुभएको छ । यो पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एउटा सकारात्मक पक्ष हो ।” “कति कुरा तत्काल देखिँदैन तर त्यसको परिणामपछि आउँछ । अहिले पोखरामा भएको साग खेल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सघाउनेमा आफू विश्वस्त छौँ”, उनले भने।
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद(साग) प्रतियोगिताको आयोजना स्थल पर्यटकीय नगरी पोखरामा आयोजित शुभारम्भ समारोहमा पञ्चेवाजा प्रस्तुत गरिदै ।
साग खेलमा सहभागी श्रीलङ्काका खेलाडी अजिथ विजयसिंघेले आफ्नो नेपालको पोखरा आउने ड्रिम नै रहेको बताए । उनले भने “नेपाल र विशेषगरी पोखराका बारेमा निकै सुनेका थिएँ । साग खेलले आफ्नो सपनाको शहर पोखरा घुम्ने रहर पूरा गरिदियो ।”
माल्दिभ्सका ब्याटमिन्टनका म्यानेजर खेलाडी अमिनाथ अहमेद दिदीले पनि आफूले सोचेभन्दा पोखरा निकै सुन्दर भएको बताए । उनले बताए, “हामी राति आएका थियौँ, जब बिहान होटलको झ्यालबाट फेवाताल र खुलेको हिमशृङ्खला देख्यौँ, हामीले नसोचेको पायौँ ।” पोखराको गौरीघाटस्थित होटल रानीवन आर्केटमा उसेका उनको टिमले पोखराको वातावरण र राम्रो हस्पिटालिटीले आफूहरुलाई आकर्षित गरेको बताए ।
१३ औँ साग पोखरा, जनकपुर र काठमाडौं गरी तीन ठाउँमा खेल भइरहेको छ, जहाँ तीन हजार बढी खेलाडीको सहभागिता रहेको छ ।
बक्सिङमा मिनुले पहिलो स्वर्ण जितेर रचिन् कीर्तिमान